What Can I Expect if my Child has to be Admitted to Hospital: Ukulaliswa esibhedlele – Messages for Mothers
What Can I Expect if my Child has to be Admitted to Hospital: Ukulaliswa esibhedlele
Ndingalindela ntoni ukuba umntwana wam kufuneka elele esibhedlele?
Ukuba umntwana wakho akaziva kakuhle yaye kufuneka alale esibhedlele, ugqirha uza kuthatha iswabhu yokwenza uvavanyo ayifake empumlweni yomntwana wakho kunye/ emlomnyeni ukuvavanya intsholongwane eyenza i- COVID-19. Le yinto engavakali kamnandi ayidli ngakuba buhlungu. Iziphumo zidla ngokuvela emfa kweentsuku ezi 2-3. Abongikazi noogqirha abakhathalele umntwana wakho baza kunxiba iimpahla zokuzikhusela kude kuphume yaye kwaziwe iziphumo zovavanyo lomntwana wakho. Ezinye izibhedlele ziza kwenza uvavanyo lwe-COVID-19 kulowo umdala ukhathalela umntwana okanye umzali oza kuhlala nomntwana ewodini. Oku kungenxa yokuba abanye abantwana nabantu abadala banganalo usuleleko lwe- COVID-19 kodwa bangabonisi mpawu. Kuxhomekeke kwiziphumo zomntwana ze-COVID-19 ukuba zthi unayo okanye akanayo, bangalaliswa kwiiwodi ezahlukeneyo esibhedlele.
Ndingamlungisa njani umntwana wam ukuba kufuneka alaliswe esibhedlele?
Ungancedisa ukulungiselela umntwana wakho ngokumxelela ukuba wonke ubani osesibhedlele uza kube enxibe isifonyo yayengamanye amaxesha ezinye iimpahla zokuzikhusela ukuze anqande ukusasazeka kwentsholongwane ye- COVID-19. Ungabaxelela ukuba kungafuneka benze olunye uvavayo olufana nolo lokufakwa kweswabhu empumlweni kunye novavanyo lwegazi kodwa uza kukwazi ukuhlala nabo.
Yintoni evumelekileyo nengavumelekanga ukuyithatha ndihambe nayo?
Nceda uze nesifonyo sakho selaphu, iNcwadana yoMgaqo oya eMpilweni, isazisi sakho kunye nomnxeba kamakhal’ekhukhwini. Ngokuthe gabalala, izibhedlele zikhetha iintsapho ukuba zingezi nenye ingubo neempahla emntwaneni nanjengoko ezo zinto zingathi kanti zinentsholongwane kuzo.
Ngubani oza kuvunyelwa ukuhlala nomntwana wam?
Ukuba awudibananga nabantu abasulelwe yi-COVID-19 kwiiveki ezi 2 ezidlulileyo, yaye ungenampawu ze-COVID 19 ngoku, ungakwazi ukuhlala nomntwana wakho esibhedlele kwiiwodi ezininzi ngaphandle kokuba umntwana wakho ukwiyunithi yenkathalo eluqilima [intensive care unit (ICU)] Ukuba uneempawu ze- COVID -19 okanye uvavanywe wafunyanwa unayo kwiintsuku ezili 10, awuyi kukwazi ukuhlala nomntwana wakho. Ungacela elinye ilungu losapho eliphilileyo ukuba lize kuhlala nomntwana wakho endaweni yakho.
← Are there any risks for children who get ill with COVID-19: Iingxaki zempilo zexesha elide nabantwana → How will I know if my child has COVID-19: Ukubonisa iimpawu zokugula